Hulu Student Isaphulelo | Kanye neSpotify Premium (2020) - Ezokuzijabulisa
IHulu iyipulatifomu enhle kakhulu yabasebenzisi abafuna ukuzwa ukuzijabulisa kwekhwalithi ngamanani aphansi. Isayithi laziwa ngomtapo wezincwadi walo omkhulu futhi linokuqukethwe okuningi okunikeza amakhasimende abo. Ungaqala ngokushesha ukubuka eminye imibukiso yakho oyithandayo ngaphandle kokukhathazeka. Uhlelo lwesaphulelo somfundi lusiza abafundi abasebasha abafuna ukusebenzisa kakhulu imali yabo. Izitshudeni ezisencane futhi ezingamashumi amabili azikwazi ukuphatha ezezimali.
Isaphulelo sabafundi singaba yindlela enhle yokunciphisa ukucindezelwa kwezezimali. Qala ukukhokhela okuncane ukuzijabulisa kwakho namuhla ngalolu hlelo. Kulo mhlahlandlela, sizokwembula izindlela onganciphisa ngazo okubhalisile.
I-Hulu Student Discount - Imininingwane emfushane
IHulu neSpotify bahlanganyele ndawonye ukunikeza abafundi izinzuzo ezingeziwe. Manje usungathola ukuzijabulisa komculo nevidiyo ngokubhaliselwe okukodwa. Kuyasiza ukonga izimali zakho kakhulu. Uma ungazi, iSpotify iyinsizakalo ebalulekile yokusakaza umculo online. Abasebenzisi bathola ukufinyelela ku-Spotify premium, i-Hulu (isekelwa isikhangiso), nesikhathi sokubonisa konke ngaphansi kwesambulela esisodwa. Kuyisixazululo esinengqondo sezezimali sabafundi abafuna ukonga imali. Siyincoma kubo bonke abafundi bethu abafuna ukuthola okuningi.
Ingxenye ehamba phambili ngalokhu okubhalisile ukuthi uthola konke lokhu mahhala izinyanga ezintathu. Sekukonke akukho ukubuyela emuva kwangempela ekusebenziseni isaphulelo sabafundi. Uthola ukufinyelela kokuzijabulisa okungapheli ngokubhaliselwe okuthathu.
Intengo yesaphulelo somfundi waseHulu:
Isaphulelo sabafundi sinciphisa izindleko zokuzijabulisa kakhulu. Abasebenzisi bangajabulela izinsizakalo ezintathu ngentengo engaphansi kweyodwa. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi izinyanga ezintathu zokuqala ziyisikhathi sesivivinyo. Ngeke ukhokhiswe lutho ngalesi sikhathi. Kuyindlela enhle yokonga imali ezindlekweni zakho zokuzijabulisa. Zonke izinsizakalo ezintathu zitholakala ngentela engu- $ 4.99 + ngemuva kwezinyanga ezintathu. Kulezi zinsuku kunezindawo eziningi zokusakaza ezitholakala kwi-inthanethi. Uma uthenga wonke amajika, khona-ke uzophela ngobunzima obukhulu esikhwameni.
Ungasithola kanjani isaphulelo sabafundi baseHulu?
Isaphulelo sabafundi baseHulu kulula ukusisebenzisela abafundi abafuna ukonga imali yabo. Kunalokho ungasebenzisa imali oyilondolozile kwenye indawo. Indlela enhle yokonga okuningi ukuhlukanisa isikweletu phakathi kwabangane abambalwa. Kunemikhawulo kakhulu ekusebenziseni i-Hulu kumadivayisi amaningi. Nazi izinyathelo zakho ukuze unike amandla isaphulelo.
Abasebenzisi kudingeka ukuthi baqale isiphequluli kukhompyutha yabo. Isaphulelo sabafundi siyatholakala kusiza esisemthethweni se-Spotify. Isiza saseHulu asinazo izinhlinzeko zokubhalisela uhlelo lwabo lwezinqwaba. Chofoza kusixhumanisi esilandelayo - https://www.spotify.com/us/student/ . Kuzokusa ekhasini lezinqwaba zabafundi.
Ekhasini lasekhaya, uzothola inkinobho ethi 'thola izinyanga ezintathu mahhala'. Chofoza kuso ukuze uqale ngenqubo yokubhalisa. Abasebenzisi kudingeka ukuthi babhalise nge-akhawunti entsha endaweni yesikhulumi. Kuyindlela enhle yokuqalisa ngenqubo.
Abasebenzisi badinga ukungena ngemvume ku-akhawunti ekhona ye-Spotify noma benze entsha. Unethuba lokungena ngemvume usebenzisa izibambo zakho zemidiya yokuxhumana nabantu njenge-Facebook noma i-Apple ID futhi. Uma ungenayo i-akhawunti, chofoza inkinobho ethi 'bhalisela i-Spotify'.
Lapho usudale i-akhawunti endaweni yesikhulumi, ungathola isaphulelo sabafundi. I-Spotify isebenzisa uhlelo lokuqinisekisa ukuqinisekisa ukuthi ungumfundi osebenzayo. Inqubo yokuqinisekisa ithatha amahora ambalwa, kuya ngekolishi lakho. Abasebenzisi futhi bangaqinisekisa mathupha ukubhaliswa kwabo kwasekolishi uma bebhekene nezinkinga ezithile.
Lapho i-akhawunti iqinisekiswe ngempumelelo, abasebenzisi bangakhokha. AbakwaSpotify noHulu bamukela izinkokhelo ngamakhadi wesikweletu nawasebhange. Ungasebenzisa futhi i-Paypal ukubhalisela izinsizakalo zabo. Kuyindlela enhle yokuqala ukuthola ukuzijabulisa kwekhwalithi online kulezi zinsuku. Yenza inkokhelo bese uqala ukusebenzisa i-Hulu ngamandla. Inani lizosiza ngokuhamba kwesikhathi. Inani le- $ 4.99 lizokwehliswa ngemuva kwesikhathi sesivivinyo sezinyanga ezintathu.
Halala! Usitholile ngempumelelo isaphulelo sabafundi se-Hulu ku-akhawunti yakho. Abasebenzisi bangavula i-akhawunti ye-Hulu kuzilungiselelo ze-Spotify. Uhlobo olufanayo manje selungasebenza kuwo wonke amapulatifomu.
Ungasiqinisekisa Kanjani Ngokwakho Isaphulelo Somfundi seHulu?
Abasebenzisi abaningi bangagcina bebhekene nephutha lokuqinisekisa. I-Spotify isebenzisa ithuluzi lokuzenzekelayo ukuqinisekisa ukuthi okubhaliselwe kwe-premium kusetshenzwa ngokushesha. Imodi yokuqinisekisa esetshenziswayo nayo iyasiza kubantu abangakwazi ukuqinisekiswa. Lapha kuzodingeka unikeze imininingwane edingekayo mayelana nekolishi lakho noma inyuvesi. Sekukonke iwebhusayithi ye-Spotify izokuqinisekisa ukuthi ufunda izifundo ezisebenzayo noma cha. Isebenza kahle namakolishi amaningi ase-US. IHulu ibuye isebenzise inqubo efanayo yokuqinisekisa kubasebenzisi bayo bezitshudeni. Uyacelwa ukuthi uthumele imibhalo yokwamukelwa kwakho ekolishi.
Ikhadi le-ID elula yasekolishi lizosiza ukwenza umsebenzi wenziwe. Abasebenzisi bangachofoza isithombe ngocingo lwabo bese besilayisha epulatifomu ukuze kuqinisekiswe ngesandla.
Sitholakala isikhathi esingakanani isaphulelo sabafundi?
Isaphulelo sabafundi seHulu neSpotify siyatholakala kubasebenzisi kuze kube ngumhla zingama-30 kuJuni 2020. Kufanele wenze ngokomzwelo wakho futhi uthole okubhaliselwe namuhla. Ngeke wazi ukuthi kuzodlula nini. Ukunikezwa kuyithuba lesikhathi esisodwa empilweni yabantu abachitha isikhathi esiningi online. Lapho usubhalisele isaphulelo, uzokwazi ukuthola izinzuzo zaso unyaka owodwa. Izinyanga ezintathu zokuqala zimahhala. Njengoba isikhathi sesivivinyo siphela, abasebenzisi kuzofanele bakhokhele okubhaliselwe izinyanga eziyisishiyagalolunye ezilandelayo.
Ngubani ofanelekela ukuthola isaphulelo?
Noma ngubani ofunda ekolishi noma eyunivesithi e-USA angajoyina uhlelo lwabafundi. Abasebenzisi baqinisekiswa ngokuzenzakalela besebenzisa uhlelo lwe-SheerID. ISheerID iyi-database yokubhalisa kwabafundi exhuma nezikhungo eziningi zemfundo. Benza inqubo yokuqinisekisa isheshe yesayithi. Banazo nezinye izinsizakalo zokuhlonza, njengezempi, abahlengikazi nodokotela. I-database inkulu kakhulu, ngakho-ke uzozithola uqinisekiswa kalula.
IHulu iyinkundla yokuzijabulisa enhle yabantu emhlabeni jikelele. Abafundi abaningi bangahle babe nokungabaza mayelana nohlelo lwesaphulelo sabafundi. Kulo mhlahlandlela, besithemba ukuphendula yonke imibuzo yakho. Jabulela ukusakaza okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu kuwo wonke amadivayisi wakho namuhla ngentengo engabizi.
Ungayilanda kanjani futhi uyifake kanjani i-Optifine yeMinecraft?
kukhona isaphulelo sabafundi se-netflix
vala izinhlelo zokusebenza ezisebenzayo ku-iphone
bukela ama-movie wamahhala kudivayisi yeselula
lapho usakaza khona imibukiso ye-tv online mahhala
ngise ekhaya idoblox id